हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने ४२ ब्राण्डका दूध मध्ये ४० मा भेटियो सोडै सोडा ! – rastriyakhabar.com
हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने ४२ ब्राण्डका दूध मध्ये ४० मा भेटियो सोडै सोडा !
काठमाडौं।हामिले दैनिक साढे ५ लाख लिटर हाराहारी प्रशोधित दूध दैनिक खपत गरिरहेका छौ। हरेक दिन काठमाडौं सहरबाट कम्तीमा २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ किसानले गाउँ लैजान्छन् ।
यस्तैअखाद्य वस्तु मिसावट भएको गुनासो मन्त्रालयसमक्ष पुगेपछि सोमबार कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले राजधानीका चारवटा डेरीमा छापा मारे ।
यी सबै डेरीमा सरसफाइको कमी देखिन्थ्यो । यीमध्ये दूध बनाउन प्रयोग गरिने धूलो दूधका बोरामा उत्पादन म्याद नखुलेको भेटिएपछि आधुनिक डेरीका ३ र पुष्प डेरीको एक गरी ४ वटा गोदाममा मन्त्री खनालले सिलबन्दी गराए । धूलो दूध बाक्लो दही बनाउन तथा दूधमा हुने ठोस पदार्थ (एसएनएफ) को मात्रा बढाउन प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै उद्योगीले किसानबाट दूधकम संकलन नहुने अवस्थामा धूलोबाटै प्रशोधित दूध बनाई चिल्लो पदार्थ (फ्याट) मिश्रण गरी बिक्री गर्ने गर्छन्।